ESI ESI KWANYE VIDIYO NA KỌMPUTA - WINDOWS - 2019
Ndebanye aha bụ ihe dị mkpa dị mkpa mgbe ị na-agbagharị ọwa gị na YouTube. Ị ga-adọta ndị ọhụrụ, ma mgbasa ozi bụ obere akụkụ. Ikwesiri ihe iji dina onye ozo nke biara n'ezo gi. Ọmma maka nke a ga-abụ vidiyo nke a ga-egosi ndị na-ekiri ọhụrụ.
Inye vidiyo dị ka ngosi nke ọdịnaya gị dị mfe. Ma chebara nlebara anya na nkwadebe nke vidio ya, n'ihi na ọ ghaghị igosi onye na-ekiri ihe ọdịnaya na-echere ya, nakwa, ọ ga-abụ mmasị. Otú ọ dị, nkwupụta dị otú ahụ ekwesịghị ịdị ogologo oge, ka ndị mmadụ wee ghara ịkụ ụda mgbe ha na-ekiri. Mgbe i mepụtara vidio dị otú ahụ, malite na-ebugote ya YouTube, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike itinye vidiyo a na ụgbọala na-adọkpụ.
Mepụta igwe egwu egwu YouTube
Mgbe i bulitere vidiyo ahụ, nke a kwesiri ịbụ ihe ngosi, ị nwere ike ịga n'ihu. Ọ naghị ewe oge dị ukwuu, Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị ghọtara ntọala ahụ tupu ịmepụta vidiyo dị otú ahụ.
Anyị na-elele "Isi"
A ghaghị inye nhọrọ a iji gosipụta ihe ndị dị mkpa, gụnyere ike ịgbakwunye ụgbọala na-adọkpụ. A na-ahọrọ ụdị a dị ka ndị a:
Banye na akaụntụ gị ma gaa na ibe gị site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị na menu aka ekpe.
Pịa na gia nke dị n'okpuru isiokwu nke ọwa gị, n'aka ekpe nke bọtịnụ Idenye aha.
Mee ihe mmịfe ahụ na-abụghị "Hazie ihu nyocha ihu na ihu" wee pịa "Chekwa"maka ntọala iji mee ihe.
Ugbu a, i nwere ohere ịgbakwunye ụgbọala na-adọkpụ ma na-achịkwa akụkụ ndị ọzọ na-adịbeghị.
Na-agbakwunye otu ụgbọala na-adọkpụ
Ugbu a, ị nwere ike ịhụ ihe ọhụrụ mgbe ị gbanwechara ihu na ihu "Chegharịa". Iji mee ihe ngosi vidio kpọmkwem, ịkwesịrị:
Nke mbụ, mepụta ma budata ụdị vidiyo dị otú ahụ na ọwa gị. Ọ dị mkpa na ọ bụ ọha na eze, ma ọ bụghị emechi ma ọ bụ nweta naanị site na aka.
Gaa na peeji nke ọwa site na ịpị bọtịnụ na saịtị YouTube na menu na ekpe.
Ugbu a ịkwesiri igodo taabụ "Maka ndị ọhụrụ na-ekiri".
Ịnwere ike ịgbakwunye ụgbọala na-adọkpụ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Họrọ vidiyo ma pịa bọtịnụ. "Chekwa".
Ị nwere ike ịme ka ibe ahụ nweta ka ị hụ mgbanwe ahụ. Ugbu a, ndị ọrụ niile na-edeghị aha gị ga-enwe ike ịhụ ụgbọala a na-adọkpụ mgbe ị na-agbanye ya.
Gbanwee ma ọ bụ wepu ụgbọala na-adọkpụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe vidiyo ọhụrụ ma ọ bụ na ịchọrọ ihichapụ ya ma ọlị, ịkwesịrị ịgbaso usoro ndị a:
Gaa na ibe na ibe ma họrọ taabụ "Maka ndị ọhụrụ na-ekiri".
N'elu nri nke vidiyo ị ga-ahụ bọtịnụ dị n'ụdị pensụl. Pịa ya iji gaa edezi.
Họrọ ihe ị chọrọ. Gbanwee ma ọ bụ hichapụ ihe nkiri.
Nke a bụ ihe niile m ga-achọ ikwu banyere ịhọrọ vidiyo na ịmepụta ihe ngosi gị. Echefula na nke a bụ kaadị azụmahịa gị. Ọ dị mkpa ịmanye onye na-ekiri ka ị denye ma lee vidiyo gị ndị ọzọ, ya mere ọ dị mkpa ka ịchọta site na sekọnd mbụ.